Waan Bayy’ee nama Gaddisiissuu. Ragaan namoota sirna bulchinsa Abiyyi Ahmad jalatti ajjeefamanii – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaan Bayy’ee nama Gaddisiissuu. Ragaan namoota sirna bulchinsa Abiyyi Ahmad jalatti ajjeefamanii
Waan Bayy’ee nama Gaddisiissuu. Ragaan namoota sirna bulchinsa Abiyyi Ahmad jalatti ajjeefamanii
Waan Bayy’ee nama Gaddisiissuu. Ragaan namoota sirna bulchinsa Abiyyi Ahmad
jalatti ajjeefamanii akka ibsutti lakkoofsi ilmaan Oromoo kanneen ajaja Abiyyi Ahmadiin ajjeefamanii 9529 gahee jira.
Ragaan akka ibsutti, Namoonni. 5888 Wallaggaa fi Gujii akkasumas 994 hararghe
keessatti kan ajjeefamaniidha. Namoonni 2,647 godinaalee oromiyaa garaagaraa keessatti kan
ajjeefamaniidha. Oromoo tiyya callifnus ni reebamna, ni Hidhamna, ni Ajjeefamna, mana teessus ni duuta, qa’ee teetiitti gad baatus ni duuta, mirga kee yoo gaafattes ni duuta. Eega duuti hin oolle Falmachaa du’a seenaa du’uu irra wayya Qeerroo roorroon daangaa dabrite qabsoof of qopheessaa!!
Oromoo koo hardha Jawaar ilaaluuf hiriyoota waliin gara Qaalitti imaleen ture. “Akka malee laafanii jiru bahuu hin danda’an.” Nuun jedhan waardiyyooni, tahuus garuu isiniif dubbiisna jedhanii kadhannaa baayyeen booda Jawaar fi Haamzaa Booranaan waardiyyootaan qabamani nu dubisuuf as bahan. Baqallaaf Shamsadin Xaahaan akka malee waan dadhabanif gad bahu hin dandeenye. Jawaar fi Hamzaa akkuma as bahaniin namoonni Isaanin gaafachu dhufe hundi imimmaan harcaasutti kahe. Akka malee huqqatanii jiru
. Jarri lachuu dubachuu hin dandeenye.
An dhunfaa kiyyaan, gaafan ijaan ilaalu heedduun rifadhe, qaama kootu kirkire. Hagam haala rakkisaa keessa akka jiran beekus haala kanaan qaamni isaani gad bu’a jedhe garu hin eegne. Daqiiqaa tokko illee nu bira hin turre. Dafanii ol galan. Fuulli kokolfaa abdii namatti horu sun hardha hin jiru. Dhugummaan qabsootti jiru! Lubbuu isaanii tokkitti saba isaan jaalatanif mararsifatanif keennaadha jiru. Saba isaanif lubbuu isaanii arsaa gochuuf murteefataniru. Kan isaan du’aa olchu qabsoo uummata Oromoo qofa dha. Oromoo koo hoogantoonni kee salphina jalaa si baasuuf du’aa jiru. Bakkuma jirtuu caasaa kee jabbeesi falmaa fininsi, qabsoo keen warra siif du’aa jiran lubbuu itti hori. Gaafas kaayyoo barootaaf qaali heedduu itti wareegde galmaan geesifta.
Geme D. Dhera
Dhimma Jawaarii fi Baqqalaanfaa Hospitaala dhuunfaatti doktora dhuunfaatiin akka yaala hin arganne kan godhaa jira Itti Aanaa MM fi Ministeera Aajaa Alaa obboo Dammaqaa Makonnin ta’uun odeeffannoo qabatamaatu jira. Torbaan kana keessa Hoteela Sky Light keessatti namoota muraasa waliin waltajjii dhoksaa taa’uun isaanii irra qaqabamee jira.
Namoota kanneen keessaa:-
1. Perezedaantii Mana Murtii Federaalaa Aaddee Maazaa Ashannaafii
2. Abbaa Alangaa Federaalaa obboo Geediyoon Ximootiyoos
3. Itti Gaafatamaa Mana Hidhaa Qaallitti
waliin waltajjii dhoksaa taa’anii gochaalee amma Jawaarii fi obboo Baqqalaa fa’aa irratti ta’aa jiruuf kallattii kaa’aniiru.
Bu’uuruma kallattii kaawwataniin manni murtii murtii kennuu dhiisee beellama sobaan turtii hidhamtootaa mana hidhaa keessatti akka dheeratu gochuu.
Abbootii alagaa Jawaarfaa himachaa turan irraa amatummaa fi itti quufinsa waan hin qabneef dhimma isaanii itti dhiyeenyaan abbaan alangaa federaalaa Obboo Geediyoon Ximootiyos akka hordofu godhaniiru.
Namichis itti gaafatamummaa fudhateen hojii isaa eegaleera.
Itti gaafatamaan mana hidhaa Qaallittiis ajaja Manni Murtii kennuun ol kan abbaan alangaa kennu hojii irra akka oolchu hubachiisaniiru. Manni hidhaas maatii hidhamtootaa rakkisuu irraa hanga sobaan hidhamtoota irratti shira xaxuutti hojjachuu irratti argamu.
Dubbiin Ijoon dhimma kanaa
1. Waltajjichi dhoksaan qaamni kamiyyuu osoo hin beekiin taa’amuu.
2. Itti gaafatamtoota manneen hidhaa federaalaa hunda keessaa hoogganaa mana hidhaa Qaallittii qofa irratti affeeruu.
Ida’ama shira ammeenyaa namoota kanneeniitiin lubbuun hayyoota keenyaa yaaddoo keessa galeera. Ummanni Oromoo shira ilmaan nafxanyaa kana hubachuun yeroo rakkisaa kanatti ilmaan isaa qaqqabuu qaba.
Eritrea’s Silent War
Yemane Nugussie, a teacher turned opposition to the Tigray People Liberation Front (TPLF) , was reportedly gunned down